ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ''မန္တလေး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု လုပ်နေကျလူတွေ အစီအစဉ်တကျ လုပ်သွားတာ'' (စာရေးဆရာ ကျော်ရင်မြင့်နှင့် မေးမြန်းချက်)
''မန္တလေး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု လုပ်နေကျလူတွေ အစီအစဉ်တကျ လုပ်သွားတာ'' (စာရေးဆရာ ကျော်ရင်မြင့်နှင့် မေးမြန်းချက်)
DVB -5July 2014
ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်က မန္တလေးမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်မှုတွေဟာ အစီအစဉ်တကျ လုပ်နေကျလူတွေက လုပ်သွားတာလို့ မြို့ခံသတင်းစာဆရာနဲ့ စာရေးဆရာ ကျော်ရင်မြင့်က ပြောပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ ကိုင်တွယ်မှု အားနည်းချက် ရှိတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆရာကျော်ရင်မြင့်ကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
- မန္တလေးပဋိပက္ခ အစိုးရကိုင်တွယ်မှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ် click
- မန္တလေးပဋိပက္ခသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကြံမှုဟု ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ပြော click
- မန္တလေးပဋိပက္ခအတွင်း လူသတ်မှု ဖမ်းမိခြင်းမရှိသေးဟု ဝန်ကြီးချုပ် ပြော click
- မန္တလေး ပဋိပက္ခများအတွင်း အပျက်အစီးများ (ဓာတ်ပုံ) click
- ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့ မန္တလေးမြို့ အခြေအနေ တည်ငြိမ် click
- ဇူလိုင်လ ၅ ရက် မန္တလေးမြို့မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ) click
- မန္တလေးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေည၀ါဆရာတော် မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြား (ရုပ်သံ) click
- မန္တလေးမြို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စဉ်မှာ ၈ ဦး ဖမ်းဆီးထား (ရုပ်သံ) click
- ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ ဈေးအရောင်းအ၀ယ် ပါး (ရုပ်သံ) click
- ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ကာလရှည်ကြာမည်ကို မန္တလေးမြို့ခံများ စိုးရိမ် (ရုပ်သံ) click
- ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကိုပါ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်အပြီး မန္တလေး ခုနစ်မြို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့် မလိုက်နာသူ ၁၀၀ ခန့်ကို ပုဒ်မ ၁၈၈ ဖြင့် အရေးယူ click
- မန္တလေး အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သင်္ချိုင်းအား မီးရှို့သူများနှင့် တုတ်၊ ဓား လက်နက် ကိုင်ဆောင်ရမ်းကားသူ ခုနစ်ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊(ဂ) နှင့် ပုဒ်မ (၂၅၄/၁၄၇) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ click
- မန္တလေးမြို့၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော လူစုလူဝေးဖြင့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများတွင် မြို့ခံသံဃာတော်များ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း ဆရာတော်များ မိန့်ကြား click
- တကျော့ပြန် ပဋိပက္ခများနှင့် ဖော်ထုတ်ရမည့် အမှန်တရား (ဆောင်းပါး) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:32 AM
Dr. Lun Shwe,
You had resumed your blog news as years ago.
I get complete news information about Burma by reading your blog.
Congratulation for your health.